Sonkorow ( Macaanka ) - Prepared by Maow Abdirisak
Jirku wuxuu u jejebiyaa cuntada aad cunto inta badan nooc quwad ah oo loo yaqaan sonkor (glucose). Glukoos waa eray kale oo la yaqaan sonkorta.
Insuliin waa hormoon ku caawiya sonkorta inuu ka wado dhiigga oo geeyo unugyada jirka.
# Beeryarta oon insuliin samayn (Nooca 1 sonkorowga)
# Beeryarta oon samayn insuliin ku filan, ama jirka oon isticmaali karin insuliinkii uu sameeyey (Nooca 2 sonkorowga).
# Noog xad dhaaf ah / daalid
Sonkorowgu dhakhso ayuu soo baxaa, asagoon digniin lahayn. Mararka kale si aayar ah ayuu u soo baxaa, dhawr bilood.
Baaridda dhiigga ee ugu caansan oo la sameeyo si loo helo haddii aad qabto sonkorow waa heerka sonkortaada. Haddii aad soomantahay heerka sonkortu waa 126 ama ka badan, inta badan sonkor baa la tuhmaa.
Si loo sameeyo tan waa cuntada laysu dhelli tiro, daawada (insuliin ama tan afka / kiniin) iyo jinaastiko (jemicsi) ayaa loo baahan yahay.
# Midabka (sonkorowgu wuxu ku badanyahay Madowga, Isbaanishka, iyo Maraykan dhaladka ah)
# Ma samayn beeryartu insuliin
# Fursadda ay caruurtu ku qaadayso nooca sonkorowga 2 waa 50% haddii hal ama 2 waalid qabaan. Aad bay caadi u tahay in nooca sonkorowga 2 uu reer isu maro. Sababtan darteed, reerkii leh taarikh sonkorowga nooca 2 waa inay yareeyaan isirrada khatarta ah. Luminta culayska, haddii aad u culustahay, ayaa ugu muhiimsan.
# Ma laha daawo sonkorowga, laakiin waxaa lagu xakamayn karaa:
* Cunto qaadasho
# Cilmi baarista sonkorowgu waxay u shaqaynaysa si loo helo daawo. Waxaa kaloo jira shaqo la qabtay oo lagu soo saaray tallaal Nooca I sonkorowga.
* Qorshaynta cuntada
* Tag fasalada sonkorowga.
Qoraaladaan waxaan ka soo uruuriyo webka hoos ku saxiixan ( W.s. maow abdirisak )